ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့မေ့လျော့ထားတတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးက Breakouts တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင် 😉 – Trend.com.mm
ဒီတစ်ခါတော့ Trend ပျိုမေတို့အတွက် အလှအပရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့ တကယ်အသုံးဝင်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဒီနည်းလေးက ရိုးရှင်းလွန်းပေမဲ့ တကယ်ထိရောက်ပါတယ်နော်။တစ်ချို့က ဒီနည်းလေးကိုသိပ်အကျိုးမရှိဘူးထင်ပြီးပေါ့ပေ့ါဆဆမေ့လျော့ထားတတ်ကြပါတယ်။ဘယ်လိုနည်းလမ်းလဲဆိုတော့ မျက်နှာကို ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံနည်းပါ။တစ်ချို့ကတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုရင် ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံမယ့်အတူတူ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့မျက်နှာကိုသစ်ပေးကြတယ်။ဒါလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပေါင်းခံနည်းလောက်တော့
ဒါဖြင့် ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံနည်းက ဘာတွေအတွက်အကျိုးရှိလဲ၊ဘယ်လိုထိရောက်မှုရှိလဲ??
၀က်ခြံထွက်တယ်ဆိုတာ ချွေးပေါက်တွေပိတ်ဆို့ရာကနေတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီလိုရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံပေးမယ်ဆိုရင် ချွေးလေးတွေထွက်လာမယ်။ပြီးရင် ချွေးပေါက်ပိတ်နေတာတွေပွင့်သွားမယ်။အဲ့ဒီအခါ ချွေးပေါက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေလည်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံပေးတာက ချွေးပေါက်တွေဖွင့်ပေးလို့ ဆားဝက်ခြံတွေဟာ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါ မျက်နှာအရေပြားပေါ်ကနေညင်ညင်သာသာဖယ်ရှားသန့်စင်လိုက်ရုံပါပဲ။
တစ်ခါတစ်လေ၀က်ခြံလည်းမဟုတ်၊ဆားဝက်ခြံလည်းမဟုတ်ပဲ အဖြူဆံလေးတွေနဲ့အဆီဖုလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာအဆီအရမ်းများတဲ့အတွက် ဒီလိုအဆီဖုတွေဖြစ်လာတာပါ။ချွေးပေါက်တွေထဲမှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတာကြောင့်တော်ရုံနဲ့မပျောက်တတ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့် နဖူးနဲ့မျက်လုံးအောက်ဘက်တွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအဆီဖုလေးတွေကိုလည်း ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံနည်းနဲ့ဖယ်ရှားပစ်လို့ရပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံတယ်ဆိုတာ ပြောရမယ်ဆိုရင် Deep Cleansing လုပ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ရေနွေးငွေ့တွေက ချွေးပေါက်ကိုဖွင့်ပေးပြီးချွေးပေါက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့ ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံတာဟာ သွေးလည်ပတ်မှုကိုပါ အထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်တဲ့။ဆဲလ်သေတွေဖယ်ရှားပေးပြီး သွေးလည်ပတ်မှုတွေကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက် အရေပြားထဲမှာအဆိပ်အတောက်တွေမရှိတော့ပဲ ကြည်လင်တောက်ပပြီးနူးညံ့တဲ့အသားအရည်ကိုရရှိလာစေတာပါ။
အလှကုန်ပစ္စည်းတွေသုံးသာသုံးနေတာ။ကိုယ့်အတွက်ဘာမှလည်းမထူးခြားဘူး၊ပစ္စည်းသာကုန်သွားတယ်။ဘာမှမထူးလာဘူးဆိုရင် ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံနည်းလေးသုံးကြည့်လိုက်ပါ။ရေနွေးငွေ့ကိုပုံမှန်ပေါင်းခံပေးတဲ့အခါ မျက်နှာကအဆိပ်အတောက်တွေ၊အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်သွားလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်သုံးလိုက်သမျှအလှကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အစွမ်းက ၂ဆလောက်မြင့်တက်သွားပါလိမ့်မယ်။Cream ၊ moisturizer စတဲ့ Cosmetic တွေကိုအရင်သုံးနေကျ ပမာဏာထက်လျော့ပြီးသုံးရင်တောင် မျက်နှာအရေပြားကစုပ်ယူနိုင်စွမ်းအားကောင်းနေတဲ့အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုက
အရင်ဆုံး မျက်နှာကို မျက်နှာသစ်ဆေးအပျော့စားလေးနဲ့ချေးချွတ်သန့်စင်ပေးပါ။Scrub လုပ်တာမျိုး၊အပြင်းစားမျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့သစ်တာမျိုးတော့မလုပ်မိပါစေနဲ့။ပြီးရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါလေးနဲ့ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ရေနွေးထည့်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ထည့်မယ့်ပန်းကန်၊ခွက်စတဲ့အရာက ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့ကွက်တိဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်။အရမ်းပူနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသွားပြီး မျက်နှာမအပ်မိပါစေနဲ့။မျက်နှာအရေပြားက ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးနူးညံ့ပါတယ်။ဒီတော့ အဲ့ဒီရေနွေးခွက်ပေါ်ကနေ ပိတ်စအပါးလေးအုပ်ပြီးမှဖြစ်စေ၊အနည်းငယ်နွေးတေးတေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှဖြစ်စေ မျက်နှာကိုပေါင်းခံတာမျိုးလုပ်ပါ။မျက်နှာပေါင်းမခံခင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါလေးနဲ့ခေါင်းကိုအရင်ဆုံးအုပ်ပေးထားဦးနော်။အဲ့ဒါမှရေနွေးငွေ့ကိုပိုပြီးစုပ်ယူနိုင်မှာပါ။ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံနေတုန်း မျက်နှာကိုနှိပ်နယ်ပေးပါ။
ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံပြီးရင်တော့ မျက်နှာကို ပျားရည်နဲ့ဖြစ်စေ၊ရွံ့စေး Mask နဲ့ဖြစ်စေပြန်ပြီးပေါင်းတင်ပေးပါ။၁၅မိနစ်လောက်ထားပြီးတဲ့အခါရေနွေးနွေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးသစ်ပေးပါ။အားလုံးပြီးရင်တော့ မျက်နှာကို တာဝါလေးနဲ့ညင်သာစွာသုတ်ပေးပြီး ကိုယ်လိမ်းနေကျ တိုနာ၊ခရင်မ်စတာတွေကိုလိမ်းပေးရုံပါပဲ။မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါ အသားအရည်ကပိုပြီးကြည်လင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါင်းတင်တာကို တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါပဲလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုတော့သတိထားပေးပါ။ခဏခဏလုပ်နေမယ်ဆိုရင် Breakouts တွေပိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကဲ အားလုံးပဲ သဘာဝအတိုင်းကြည်လင်လှပတဲ့မျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ 😘
ဒီတဈခါတော့ Trend ပြိုမတေို့အတှကျ အလှအပရေးရာနဲ့ပတျသကျလို့ တကယျအသုံးဝငျပွီးအကြိုးရှိတဲ့နညျးလမျးကောငျးလေးတဈခုကိုပွောပွပေးသှားပါမယျ။ဒီနညျးလေးက ရိုးရှငျးလှနျးပမေဲ့ တကယျထိရောကျပါတယျနျော။တဈခြို့က ဒီနညျးလေးကိုသိပျအကြိုးမရှိဘူးထငျပွီးပေါ့ပေ့ါဆဆမလြေ့ော့ထားတတျကွပါတယျ။ဘယျလိုနညျးလမျးလဲဆိုတော့ မကျြနှာကို ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံနညျးပါ။တဈခြို့ကတော့ ဘယျလိုလုပျကွလဲဆိုရငျ ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံမယျ့အတူတူ ရနှေေးနှေးလေးနဲ့မကျြနှာကိုသဈပေးကွတယျ။ဒါလညျးကောငျးတော့ကောငျးပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ဒီလိုပေါငျးခံနညျးလောကျတော့
ဒါဖွငျ့ ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံနညျးက ဘာတှအေတှကျအကြိုးရှိလဲ၊ဘယျလိုထိရောကျမှုရှိလဲ??
ဝကျခွံထှကျတယျဆိုတာ ခြှေးပေါကျတှပေိတျဆို့ရာကနတေဈဆငျ့ ဖွဈပျေါလာတာပါ။ဒီလိုရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံပေးမယျဆိုရငျ ခြှေးလေးတှထှေကျလာမယျ။ပွီးရငျ ခြှေးပေါကျပိတျနတောတှပှေငျ့သှားမယျ။အဲ့ဒီအခါ ခြှေးပေါကျထဲမှာရှိနတေဲ့အညဈအကွေးတှလေညျးထှကျလာပါလိမျ့မယျ။
ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံပေးတာက ခြှေးပေါကျတှဖှေငျ့ပေးလို့ ဆားဝကျခွံတှဟော နူးညံ့ပြော့ပြောငျးလာပါလိမျ့မယျ။အဲ့ဒီအခါ မကျြနှာအရပွေားပျေါကနညေငျညငျသာသာဖယျရှားသနျ့စငျလိုကျရုံပါပဲ။
တဈခါတဈလဝေကျခွံလညျးမဟုတျ၊ဆားဝကျခွံလညျးမဟုတျပဲ အဖွူဆံလေးတှနေဲ့အဆီဖုလေးတှဖွေဈတတျပါတယျ။မကျြနှာပျေါမှာအဆီအရမျးမြားတဲ့အတှကျ ဒီလိုအဆီဖုတှဖွေဈလာတာပါ။ခြှေးပေါကျတှထေဲမှာအညဈအကွေးတှရှေိနတောကွောငျ့တျောရုံနဲ့မပြောကျတတျပါဘူး။အထူးသဖွငျ့ နဖူးနဲ့မကျြလုံးအောကျဘကျတှမှောဖွဈတတျပါတယျ။ဒီလိုအဆီဖုလေးတှကေိုလညျး ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံနညျးနဲ့ဖယျရှားပဈလို့ရပါတယျ။
ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံတယျဆိုတာ ပွောရမယျဆိုရငျ Deep Cleansing လုပျတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ရနှေေးငှတှေ့ကေ ခြှေးပေါကျကိုဖှငျ့ပေးပွီးခြှေးပေါကျထဲက အညဈအကွေးတှကေိုဖယျရှားပေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ပွီးတော့ ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံတာဟာ သှေးလညျပတျမှုကိုပါ အထူးကောငျးမှနျစပေါတယျတဲ့။ဆဲလျသတှေဖေယျရှားပေးပွီး သှေးလညျပတျမှုတှကေောငျးမှနျလာတဲ့အတှကျ အရပွေားထဲမှာအဆိပျအတောကျတှမေရှိတော့ပဲ ကွညျလငျတောကျပပွီးနူးညံ့တဲ့အသားအရညျကိုရရှိလာစတောပါ။
အလှကုနျပစ်စညျးတှသေုံးသာသုံးနတော။ကိုယျ့အတှကျဘာမှလညျးမထူးခွားဘူး၊ပစ်စညျးသာကုနျသှားတယျ။ဘာမှမထူးလာဘူးဆိုရငျ ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံနညျးလေးသုံးကွညျ့လိုကျပါ။ရနှေေးငှကေို့ပုံမှနျပေါငျးခံပေးတဲ့အခါ မကျြနှာကအဆိပျအတောကျတှေ၊အညဈအကွေးတှကေငျးစငျသှားလို့အဲ့ဒီအခြိနျမှာကိုယျသုံးလိုကျသမြှအလှကုနျပစ်စညျးတှရေဲ့ အစှမျးက ၂ဆလောကျမွငျ့တကျသှားပါလိမျ့မယျ။Cream ၊ moisturizer စတဲ့ Cosmetic တှကေိုအရငျသုံးနကြေ ပမာဏာထကျလြော့ပွီးသုံးရငျတောငျ မကျြနှာအရပွေားကစုပျယူနိုငျစှမျးအားကောငျးနတေဲ့အတှကျ အကြိုးသကျရောကျမှုက
အရငျဆုံး မကျြနှာကို မကျြနှာသဈဆေးအပြော့စားလေးနဲ့ခြေးခြှတျသနျ့စငျပေးပါ။Scrub လုပျတာမြိုး၊အပွငျးစားမကျြနှာသဈဆေးနဲ့သဈတာမြိုးတော့မလုပျမိပါစနေဲ့။ပွီးရငျ မကျြနှာသုတျပုဝါလေးနဲ့ခွောကျအောငျသုတျပါ။ရနှေေးထညျ့တဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျထညျ့မယျ့ပနျးကနျ၊ခှကျစတဲ့အရာက ကိုယျ့မကျြနှာနဲ့ကှကျတိဆိုရငျပိုကောငျးပါတယျ။အရမျးပူနတေဲ့အခြိနျမှာလညျးသှားပွီး မကျြနှာမအပျမိပါစနေဲ့။မကျြနှာအရပွေားက ထငျထားတာထကျပိုပွီးနူးညံ့ပါတယျ။ဒီတော့ အဲ့ဒီရနှေေးခှကျပျေါကနေ ပိတျစအပါးလေးအုပျပွီးမှဖွဈစေ၊အနညျးငယျနှေးတေးတေးဖွဈသှားတဲ့အခါမှဖွဈစေ မကျြနှာကိုပေါငျးခံတာမြိုးလုပျပါ။မကျြနှာပေါငျးမခံခငျ မကျြနှာသုတျပုဝါလေးနဲ့ခေါငျးကိုအရငျဆုံးအုပျပေးထားဦးနျော။အဲ့ဒါမှရနှေေးငှကေို့ပိုပွီးစုပျယူနိုငျမှာပါ။ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံနတေုနျး မကျြနှာကိုနှိပျနယျပေးပါ။
ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံပွီးရငျတော့ မကျြနှာကို ပြားရညျနဲ့ဖွဈစေ၊ရှံ့စေး Mask နဲ့ဖွဈစပွေနျပွီးပေါငျးတငျပေးပါ။၁၅မိနဈလောကျထားပွီးတဲ့အခါရနှေေးနှေးလေးနဲ့ပွနျပွီးသဈပေးပါ။အားလုံးပွီးရငျတော့ မကျြနှာကို တာဝါလေးနဲ့ညငျသာစှာသုတျပေးပွီး ကိုယျလိမျးနကြေ တိုနာ၊ခရငျမျစတာတှကေိုလိမျးပေးရုံပါပဲ။မနကျမိုးလငျးတဲ့အခါ အသားအရညျကပိုပွီးကွညျလငျလာတာတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
ရနှေေးငှပေ့ေါငျးခံနညျးနဲ့ဒီလိုမြိုးပေါငျးတငျတာကို တဈပတျကိုတဈခါပဲလုပျပေးသငျ့ပါတယျနျော။အဲ့ဒါကိုတော့သတိထားပေးပါ။ခဏခဏလုပျနမေယျဆိုရငျBreakouts တှပေိုဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ကဲ အားလုံးပဲ သဘာဝအတိုငျးကွညျလငျလှပတဲ့မကျြနှာလေးပိုငျဆိုငျနိုငျပါစေ 😘